“Waxaan doonayaa inaan koobab la qaado Man United anoo ka bilaabaya Community Shield.”. Zlatan Ibrahimovic – Gool FM
“Waxaan doonayaa inaan koobab la qaado Man United anoo ka bilaabaya Community Shield.”. Zlatan Ibrahimovic
during the Wayne Rooney Testimonial match between Manchester United and Everton at Old Trafford on August 3, 2016 in Manchester, England.
(Manchester) 06 Agoosto 2016. Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay inuu Man United ugu soo biiray si uu koobab ugu guuleysto isagoona ka bilaabaya Community Shield oo ay beri ciyaari doonaan.
Red Devils oo ku soo guuleysatay FA Cup ayaa berito Wembley ku wajihi doonta kooxda xafidaneysa Premier League ee Leicester City wuxuuna sheegay joog dheere Zlatan inuu halkaa u aadayo sidii uu u soo xareyn lahaa koobkiisii ugu horreeyay ee Man United.
“Kaasi waa koobka ugu horreeya aan guriga keeni doono,” Ibra ayaa sidaa u sheegay MUTV.
“Aniga ahaan koob kasta waa mid aad iiga dhab ah, waxaan ku guuleystay 30-koob waxaana doonayaa koobab kale oo badan, ma qanci doono ilaa aan ku guuleysto wax kasta.
Laacibkii hore ee Ajex, AC Milan, Juventus iyo Barcelona ayaa biyo qabow ku seeriyay wararka soo jeedinaya inuu Man United u yimid inuu lacagihii ugu dambeeyay ee wayn ka qabsado.
“Halkan uma imaan inaan waqti ku lumiyo, waxaan halkan u imid inaan guuleysto, waxaan aaminsanahay in kooxduna qabto falsafadan oo kale, gaar ahaan koox sidan oo kale ah, waxaaba loo sameeyay inay guuleystaan.”.
MUUQAAL & SAWIRRO: Milan oo uu Shiine iibsadey waxay maanta oo kale koobkeedii ugu dambeeyay ee rasmi ah ku qaadday ciidda Shiinaha!
LIXDA LAGA HARAY: Maxay lixda macallin ee sanadkan ugu waawayn EPL ay ka yiraahdeen fasal-ciyaareedka cusub ee Sabtiga furmaya? (Daawo)